Ogaden News Agency (ONA) – Iiraan oo Ku Hanjabtay Inay Carqaladayn Doonto Shidaalka Khaliijka.
Iiraan oo Ku Hanjabtay Inay Carqaladayn Doonto Shidaalka Khaliijka.
Maalin kadib markii Madaxweynaha Iran Xasan Rowxani uu sheegay in dalkiisa uu carqaladeyn doono dhamaan ganacsiga shidaalka ee dalalka Bariga Dhexe hadii Maraykanka faraha lasoo galo ganacsigooda, ayey hogaanka Militariga Iran sheegeen inay ka dhabeyn doonaan oo ay fulin doonaan amarka Madaxweynahooda.
Xiisadan ayaa kusoo beegmaysa xili Maraykanka uu sheegay inuu ka baxay heshiiskii la saxiixay 2015 ee u dhaxeeyey dalalka Awooda leh iyo Iran, isla markaana Maraykanka soo saaray cunaqabateyn hor leh oo lagu cadaadinayo wadankaasi Iran.
Maraykanka ayaa dalalka Caalamka u qabtay illaa 4-ta bisha November ee sanadkan inay joojiyaan saliida ama shidaalka ay ka gataan wadanka Iran, xukuumada Maraykanka ayaa sheegtay in gebi ahaan la joojin doono batroolka Iran ee caalamka loo suuq geeyo.
Madaxweyne Rowxaani ayaa sheegay in hadii Maraykanka faraha lasoo galo ganacsigooda batroolka ay iyaguna qaadi doonaan tilaabooyin adag oo ay ku carqaladeenayaan guud ahaan ganacsiga shidaalka ee Bariga Dhexe, sida laga soo xigtay warbaahinta Dowlada Iran. Xasan Rowxaani oo shalay digniintan soo saaray ayaa ku sugnaa magaalada Vienna ee dalka Austria halkaasi oo uu kulamo kula lahaa dalalka Beesha Caalamka ee qeybta ka ahaa saxiixii heshiiskii 2015, kuwaasi oo weli doonaya in heshiiskaasi la badbaadiyo.
Iran ayaa horey marar badan ugu hanjabtay inay xiri doonto gacanka Hormuz, halkaasi oo ay maraan inta badan maraakiibta shidaalka ka qaada dalalka Khaliijka, arrintaasi oo laga cabsi qabo inay horseedo dagaal balaaran oo dhexmara Iran iyo xulafada Maraykanka ee dalalka Carabta Khaliijka sida Sacuudiga iyo UAE oo iyagu si weyn u taageersanaa go’aankii Donald Trump uu ku burburiyey heshiiskii 2015 ee dalka Iran looga qaaday cunaqabateyntii saarneyd.